Videos - The Word Foundation • Thinking and Destiny and HW Percival
Fisainana sy faniriana, by Harold W. Percival, dia notendren'ny olona maro ho boky tena feno izay nosoratan'ny olona sy izao tontolo izao. Ao amin'ny pirinty mandritra ny taona 70, dia manome hazavana mamirapiratra eo amin'ireo fanontaniana lalina izay nahavariana ny maha-olombelona hatrizay. Ny pejin'ny horonan-tsarimihetsika misy antsika dia ahitana fampisehoana an-tsary ny pejy voalohany 3 Fampidirana ary ny fomba fijery, amin'ny fampiasana ny tenim-pon'i Percival, ho fomba mahazatra Fisainana sy faniriana nosoratana.
Harold Percival dia nanoritsoritra ny traikefa mahery sy tsy ara-pihetseham-po ho an'ny fahatsiarovany ny fahatsiarovan-tena ao amin'ny sasin-tenan'ny magnum opus, Fisainana sy faniriana. Ity horonantsary ity dia fitantarana avy amin'ireo pejy ireo. Izany no hany fomba iray nampiasan'ny olona voalohany "I". Tsy hita na aiza na aiza ao Fisainana sy faniriana. Percival nanambara fa aleony ny boky dia miorina amin'ny fahamendrehany ary tsy manohintohina ny toetrany.